I-Brandt yenza indlu yamandla kumthengisi wezixhobo zamazwe ngamazwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » I-Brandt yenza indlu yamandla kumthengisi wezixhobo zamazwe ngamazwe
I-Brandt Tractor Ltd., icandelo eliphantsi kweBrandt Group of Companies, iyavuya ukwazisa ukuba iyifumene ngempumelelo iCervus Equipment Corp., ilandela i-97.66% yoqinisekiso lwesivumelwano ngo-Oktobha 12, 2021 ivoti ngabaninizabelo baseCervus. Intengiselwano ibona iCervus ethengisayo esidlangalaleni ukuya kwi-100% yobunini babucala kwisivumelwano semali yonke.
Intengiselwano ephawulekayo idala uthungelwano lomthengisi wezixhobo ezinkulu eKhanada, yongeza ezolimo ezingama-64, ezothutho, kunye neendawo zezixhobo zokuphatha impahla kwi-Brandt ekhoyo kurhwebo lwe-John Deere Construction & Forestry kulo lonke elaseKhanada. Xa idityaniswe ngokupheleleyo, iya kunika abathengi bakaCervus ukufikelela kwiindawo ezibanzi zelizwe laseBrandt kunye neziseko zoncedo lobugcisa.
Ukuthenga kuphinda kumisele indawo yefemu njengenkulumbuso yabucala yenkampani yaseKhanada kunye neyona nkampani inkulu kaJohn Deere ehlabathini.
"Ukongezwa kwenethiwekhi yesebe likaCervus luyimpumelelo enkulu kubathengi kuzo zonke iimarike ezichaphazelekayo," utsho umnini-Brandt kunye ne-CEO, uShaun Semple. "Sinento eninzi esinokunikela ngayo kwaye sikulungele ukusonga imikhono yethu kwaye sizuze ukuthembeka kubathengi bethu abatsha ngokudityaniswa kweemveliso kunye neenkonzo eziphambili kunye namava angaguqukiyo, akumgangatho ophezulu wenkxaso yabathengi."
Isivumelwano sinika uBrandt ukungena kwimarike okungenakuthelekiswa nanto, ukwandisa indawo yabo yendawo kunye nokwenza ukuba inkampani yongeze, kwiimarike ezikhethiweyo, izixhobo zezolimo zikaJohn Deere; izixhobo zothutho Peterbilt; kunye noClark, Sellick, JLG, Baumann kunye nezinye izixhobo zokuphatha izinto ukongeza kuluhlu lwabo olusele lunomtsalane lweemveliso kunye neenkonzo.
Ngokufunyanwa kweendawo zeCervus eKhanada, e-Australia naseNew Zealand, u-Brandt ngoku ungumnikazi kwaye usebenza kwi-120 yokuthengisa izixhobo zenkonzo epheleleyo kunye neendawo ezongezelelweyo zenkonzo ye-50 + kwaye iqeshe abantu abangaphezu kwe-5100.
Intengiselwano iya kwenza impembelelo ebalulekileyo kulo lonke ushishino njengoko inkampani ikhupha izicwangciso zokwazisa uluhlu lweempahla ezandisiweyo, amandla esebe lenkonzo, kunye neeyure ezondisiweyo zokusebenza kwindawo yangaphambili yokuthengisa iCervus. Njengoko imisebenzi idityanisiwe, abasebenzi kwezi ndawo kulindeleke ukuba banyuke ukuya kutsho kuma-40% ngolwakhiwo olutsha olubalulekileyo kuthungelwano luphela.
"Abasebenzi be-Cervus, abathengi, kunye noluntu lwabo bonke baya kuxhamla koku kufunyanwa ngothungelwano olunamandla, olwahlukeneyo lwabathengisi benkxaso," uqukumbela uSemple. “UBrandt uzibophelele ngokupheleleyo kutyalo-mali oluqhubekayo kwiziseko ezingundoqo zoshishino nokuphucula uluntu; kukho ithuba elikhulu kuye wonke umntu kwesi sivumelwano. "
Intengiselwano yavalwa ngokusesikweni nge-22 kaOkthobha, ngo-2021.